Anesthesia nke iku ume
Okpu eriri afọ
Kedu ihe bụ catheter Foley?
Igwe a na-ekpo oku bụ tube na-adịghị ọcha, nke na-adịkarị, nke a na-ejikarị roba roba, nke a na-etinye ya na urinary iji chịkọta mmamịrị. Enwere ike iji catheter ndị ọrịa na-awa ahụ ma ọ bụ na ndị ọrịa na-anaghị edozi ahụ. Mgbe a na-eji ngwaọrụ ọgwụ, arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ọgwụ, ọ bụ usua ...
Gịnị bụ uru nke ọgwụ na ahụ ike ọkwa silicone tubing?
Outlọ ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa n'ụlọ ọgwụ nwere ike ịhụ ọtụtụ ngwongwo roba, dị ka tubes silicone ọgwụ, sirinji silicone plọg, kegide n'aka nke silicone eriri ndị a, usoro nke ahụike ugbu a na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ kachasị nke ọgwụ bụ ọgwụ. , gịnịzi mere silicone p ...
Mmepe nke ngwaahịa silicone ọgwụ
Silicone roba dị ka akụrụngwa maka ọgwụ mgbe ọtụtụ iri afọ nke ọgwụ na-agwọ ọrịa, ka ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike ogologo oge, iji ọtụtụ na-ahụkarị, ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ iji mee roba silicone dịka isi ihe mgbaru ọsọ nke mmepe na imewe, ọgwụ silicone roba t ...
Kedu otu esi ahọrọ catheter silicone ziri ezi?
site ha na 20-11-12
Kedu otu esi ahọrọ catheter silicone ziri ezi? E jiri ya tụnyere ọkpọkọ ọdịnala ọdịnala, silicone catheter nwere uru nke ibelata nsogbu nke ibute ọrịa na ibelata iwe urinary. A na-atụle catheter a na-ahụkarị nke silicone na Foley silicone catheter. Foley silicone catheter ...
Tụnyere ihe dị iche iche nke urethral catheter
site ha na 20-09-25
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ nke oge a, a na-enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị na catheter, dịka silica gel, roba (latex), PVC na ihe ndị ọzọ. Njirimara nke latex tube bụ ezigbo ekwedo, n'ozuzu erughị ala nso nwere ike iru 6-9 ugboro nke onwe ya, na rebound ọnụego bụ 10 ...
Ewebata gbazee ịgba akara
Kemgbe February 2020, COVID-19 na-agbasa ngwa ngwa, ọtụtụ mba gburugburu ụwa emetụtawo ọrịa a nke ukwuu. Na China, agbanyeghị na-achịkwa ọnọdụ oria ọrịa ahụ, ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na ọnọdụ okpomọkụ dị ugbu a nwere ike ịbụ naanị nwa oge ...
Ndị ahịa na-eleta
Na October 25, 2019, ndị ahịa si Canon Japan bịara ileta ụlọ ọrụ anyị maka nleta ubi. Ngwaahịa na ọrụ dị elu, iru eru na aha ụlọ ọrụ siri ike, na atụmanya mmepe ụlọ ọrụ dị mma bụ ihe dị mkpa ...
Aboutlọ ọrụ gbasara mmepe ngwaahịa na mmụta
Iji meziwanye ogo azụmaahịa ndị ọrụ na ogo ogo ha, jikwa ọtụtụ ihe ọmụma na nka, ọ bụghị naanị na ha ga-egbo mkpa nke njikwa ọrụ, n'otu oge ka ụlọ ọrụ ahụ mepee ikike zuru ezu. Na Disemba 2019, ụlọ ọrụ anyị ...
Site na November 18 ruo 21, 2019, Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. sonyere na "ụlọ ọgwụ mba ụwa na ngwa ngwa ahụike nke enyere ihe ngosi" nke emere na Dusseldorf, Germany. Ihe ngosi a bu ihe a ma ama n’uwa dum ...
Tinye adreesị email gị iji nweta ihe ọhụụ na akụkọ ọhụrụ.